मूर्दाघरका कामदार बिनोद भन्छन –लास नचिरे घर चल्दैन – Nirantarkhabar
मूर्दाघरका कामदार बिनोद भन्छन –लास नचिरे घर चल्दैन
उर्लाबारी, ९ असोज ।
कहिले काँही हात चल्न खोज्छ, दायाँ फर्कायो, बायाँ फर्कन्छ, लाग्छ– पोष्टमार्टम गर्न ल्याएको लास वौरिन खोज्दैछ– ‘यो भनाइ हो उर्लाबारी–३ का बिनोद मरिकको । मरिक स्थानीय मङ्गलबारे अस्पताल (साविक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र )को पोष्टमार्टम विभागमा २०६४ देखि कार्यरत हुनुहुन्छ ।
औषत मानिस स्वाभाविक मृत्युसँग पनि डराउँछन् । अझ पूर्वीय परम्परामा भूतप्रेत र पिचासको बारेमा उत्तिकै चर्चा हुने गर्छ । तर ३१वर्षीय मरिकले भने सधैं लाससँग खेल्नुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ –एकातिर पल्टाउन खोज्यो लास अर्कैतिर पल्टछ, मरिकलाई थाहा छ यो लास हो भन्ने । यद्यपि कहिलेकाँही मुर्दाले उहाँलाई रातभरि जिस्क्याउँछ ।
सुरुसुरुमा त मुर्दाले मरिकको महिनौ दिन निन्द्रा लुट्यो, भोक खोस्यो । जागिरको थुप्रै विकल्पको खोजी गर्नुभयो । तर २ जना छोरा छोरा र श्रीमतीलाई दुई छाक जाउलो जुटाउने उपाय उहाँसँग केही छैन् । बिनोद भन्नुहुन्छ –‘अपगति परेर मरेका मान्छेको लास चिरेर डोरीले सिलाउने काम चानचुने होइन । अझ मरेको ८÷१० दिनपछि ल्याइएका लासको पोष्टमार्टम गर्न झन गाह्रो हुन्छ । स्याउस्याउ किरा भएको लास किरा पन्छाउँदै चिर्नुपर्छ । अनि सिलाउनु पनि पर्छ’– विनोदले आफ्नो पेशाप्रति दिक्दारी प्रकट गर्नुभयो ।
उर्लाबारी–३ मंगलबारेस्थित मङ्गलबारे अस्पतालमा सरदर प्रत्येक दुई दिनमा एउटा लास पोष्टमार्टमका लागि आउने गर्छ । ११ वर्षको अवधिमा कति लास चिर्नु भयो भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो – झापाको दमकमा पोष्टमार्टम हुन थालेपछि यहाँ अलि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सम्म दैनिक एउटा लास पोष्टमार्टम भएको थियो । मरिक अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी हुनुहुन्छ । मासिक ८ हजार ८ सय तलवमा काम गरिरहेका विनोदले भन्नुभयो थोरै तलवमा गाह्रो काम गर्नुपर्छ । हाम्रो माग ुनुवाई नै हुँदैन ।
यस्तो काम गर्न डर र माया लाग्दैन भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ–‘हाम्रो जातै जम्दार’ टन्न खायो काम गरो । के गर्नु ? बाँच्नका लागि केही काम त गर्नै प¥यो । जातले पाएको हामीले नगरे कस्ले गर्ला र ? उनले विरोधाभाष सन्तुष्टी व्यक्त गरे ।अस्पतालका सिनियर अहेव योगेन्द्र कट्टेलका अनुसार अनुसार उर्लाबारी अस्पताल मंगलबारेमा आ.व. ०७४÷०७५ मा २ सय ८६ वटा लासको पोष्टमार्टम भएको थियो ।यस्तै आ.व. ०७३÷०७४ मा ३ सय ६४ वटा लासको पोष्टमार्टम भएको थियो भने आव ०७२÷०७३ मा २ सय ९३ वटा लाश पोष्टमार्टम भएको थियो ।
गत वर्ष देखि दमकमा पनि पोष्टमार्टम सेवा सुरु भएपछि मङ्गलबारे अस्पतालमा केही चाप घटेको अहेव कट्टेलले बताउनु भयो ।
उर्लाबारीबाट १९ जना तासे पक्राउ